Yintoni i-Qigong & Isebenza njani?
I-Qigong - okanye "ukulima kwamandla okuphila" - uhlobo lwe-yoga ye-Taoist, eneengcambu kwiChina yamandulo. Ngokuxhasana nokuxhasa impilo jikelele kunye nokuphila, umkhuba we-qigong yisiseko sangaphakathi sobugcisa bokulwa.
Amawaka amaFomu eQigong
Kukho amawaka eefomu zeefigong ezihlukeneyo, ezihambelana namakhulu eenkolo ezikhoyo / umgca we- Taoist practice. Ezinye iifomu ze-qigong ziquka ukunyakaza okubonakalayo-kufana ne-taiji okanye i-martial arts forms.
Eminye ingundoqo ngaphakathi, oko kukuthi igxininise ekuphefumlweni , isandi, kunye nokubonakalisa ngeendlela ezifuna incinci okanye akukho ntshukumo. Nangona zonke iifom ze-qigong zijolise ekuhlakuleleni amandla omandla obomi, nganye iifom ezizodwa zineendlela ezikhethekileyo zokufezekisa iindidi ezahlukileyo "zokulima kwamandla okuphila."
I-Basic Qigong Axiom: Amandla alandela
Nangona ukungafani kwabo, kukho iindlela ezisisiseko eziqhelekileyo kuzo zonke iifigong. I-axiom ephambili yeqigong isenzo "amandla alandela ingqwalasela." Xa sibeka khona ulwazi lwethu - ingqwalasela yethu - apho i-qi, oko kukuthi amandla okuphila, iya kuhamba kwaye iqokelele. Unokuzama le nto ngoku ngokuvala amehlo akho, ukuthatha ukuphefumula okungaphantsi, kwaye ubeke ingqalelo yakho, ingqwalaselo yakho yengqondo, kwelinye yezandla zakho. Gcina ingqwalasela yakho kwimizuzwana engama-30 ukuya kumzuzu, kwaye uqaphele okwenzekayo.
Usenokuba uqaphele iimvakalelo zokufudumala, okanye ukuzaliseka, okanye ukuvakala okanye ukuvutha kwamandla, okanye ukuva ubunzima kwiminwe yakho. Ezi zivakalelo eziqhelekileyo ezinxulumene nokuhlanganiswa kwe-qi kwindawo ethile kwindawo yethu. Nangona kunjalo, amava omntu ngamnye ahlukile. Yintoni ebaluleke kakhulu ukuba uqaphele ukuba yiyiphi into ojongene nayo, kwaye uhlakulele uhlobo oluthile lokuzithemba kulo mgaqo-siseko weqigong practice: amandla alandela ingqwalasela.
Kwiinkqubo ze-yoga zamaHindu, le ngcamango iguqulelwe, ngegama lesiSanskrit, njenge- prana (amandla okuphila ubomi) ilandela i- citta (ingqondo).
Ukuphefumula Njengomqhubi woQhagamshelwano lwamandla nokuQaphela
Iyiphi indlela "amandla alandela ngayo"? Kwimigangatho yokuqala yokusebenza, oku kuninzi ukuyenza ngenkqubo yokuphefumla. Ngokufunda ukubeka ingqalelo kwibhayisikili ye-inhalations kunye nokuphumla-ukudibanisa ingqondo yethu ngokuhamba komoya - sivuselela amandla ekugxilwe kwengqondo ukuze sikwazi ukukhokela ukuhamba kwe-qi.
Igama lesiTshayina elithi "qi" ngamanye amaxesha liguqulelwa kwisiNgesi ngokuthi "umoya" - kodwa oku akunjalo, kwindlela yam, ukhetho oluhle. Ku luncedo ngakumbi ukucinga nge-qi njengamandla kunye nokwazisa. Inkqubo yokuphefumula isetyenziselwa ukukhokela ukuqonda kumanyano kunye namandla amandla okuphila-inzala ibe yinto echazwe ligama elithi "qi." Njengoko le nyunyana yokuphila-amandla omandla ngolwazi luzinzile ngaphakathi kwengqondo yomzimba ugqirha, ukuphefumla komzimba kuba (kwiminyaka emininzi yokusebenza) ngokugqithiseleyo, kuze kube yinto ebizwa ngokuba yi-embryonic breathing.
Ngokuphefumla komzimba, sinika amandla okutya ngokuthe ngqo kwiingqondo zomzimba, ngokuzimela kwenkqubo yokuphefumla.
Inkqubo yokuphefumula ngokomzimba isetyenziswe njengoluhlobo lwe-raft. Emva kokuba sidlulile umlambo - sibuyele ezweni lomama wamaCosmic (sichitha umbono wethu wokuhlukana kuyo yonke into-leyo-ke) - sikwazi ukushiya lolo hlobo lokuphefumla komzimba emva. Ngendlela efanayo yokuba intombazana "iphefumula" ngentambo yomlomo, sikwazi ngoku ukukhawuleza ngqo kwi-matrix.
Funda ngakumbi: Tai Hsi - Embryonic Breathing
Ukucacisa ukuhamba kweQi ngokusebenzisa iMeridians
Zonke iifomu ze-qigong zijolise, ngandlela-thile okanye enye, ukuvula, ukulinganisela nokucacisa ukuhamba kwe-qi ngokusebenzisa i-meridians. Kwixesha lobomi bethu, xa sinamava asinako, ngeli xesha, ngokugqiba ngokupheleleyo, amandla abo alawo mava - njengento yokutya engapheliyo emathunjini ethu - adala izibhengezo kwiimeridians. Iipatheni ezithile ezidalwe emzimbeni wengqondo ngala maqhosha enamandla achaza ukuba yiBuddhism ibizwa ngokuthi "ego" - indlela yethu eyahlukileyo yokungazi, nto esiyikholelwa ngokungafanelekileyo ukuba ngubani thina, ngokusisiseko.
Isenzo esikuQigong sisinceda ukukhulula la maqhina enamandla, ukuvumela amandla / ukuqwalasela ukuba aphinde agijime ngokukhululekile kwaye njengokuba i-Moment yamanje: ukungabikho kwamandla okubonakalayo okuqhutyelwa kuyo imicimbi yethu yomzimba .
Iimeridians: Iziteshi zoLwazi
Iintlanzi ezintathu: Jing, Qi & Shen
I-Taoist Practice & Diet
Umthendeleko wesibini we-Ninth - uCing Yang Jie
ITaoism kunye neTanmatras
UkuLawulwa kweMveliso kunye neengozi eziya kumaMakethi angaphandle
Imfazwe yaseKorea: Inkcazo
Funda amaClassred Pencil Techniques
Ngaba Ngaba Amanzi Amanzi Afayo Ikhulula Ngokukhawuleza Kunokuba I-Cold?
Ikamva eliQhathanisayo eliLungileyo kwiLatini: Indlela yokuSebenzisa nokuyiqonda
Ziziphi Izandla Zokunene Nekunene Nezandla?
I-Aerobic Exercise: Inkcazo
UJohn Travolta Uthotywe Ngxolongo kwiDrowspray
Neonicotinoids kunye neNgqongileyo
I-Warmops yezeNtlalo zezeNtlalo - Ukuzivocavoca ukufumana abafundi ukuba bacinge
Iimpawu ezivela kwi "Napoleon Dynamite"
Indlela yokufumana i-Computer Computer Certification
Awukwazi ukugcina i-Zombie Down Down: I-Movie ye-Zombie Movies ye-Top 10 Old School
I-Paramitas: Iingxaki ezilishumi ze-Mahayana Buddhism
Ngaba iiStatsera ze-Coursera ze-Online Specialization Certificates Ziyayifumana ixabiso?